Unyulo lweWikimedia Foundation / 2021 - Meta
Unyulo lweWikimedia Foundation / 2021
The election ended 31 Eye Thupha 2021. No more votes will be accepted.
The results were announced on 7 Eyo Msintsi 2021. Please consider submitting any feedback regarding the 2021 election on the elections' post analysis page.
Unyulo lwama-2021 iBhodi yeTrasti lubanjwe ngomhla we-4 kweyeThupha wama-2021 ukuya kowe-17 kweyeThupha wama-2021. Ifowuni yabaviwa iya kuvulwa nge-9 kaJuni 2021.
3 Umda wexesha
5.1 Amavolontiya olonyulo
Ukuvota kunyulo lwangaphambili beku malunga ne-10% kwihlabathi liphela. Kwakungcono kuluntu olunenkxaso yonyulo lwamavolontiya. Abanye babahlali bafikelela ngaphezulu kwe-20% yokuvota.
Ngaba uyafuna ukunceda ukuphucula amanani abavoti kwindawo ohlala kuyo? Awudingi ukuba namava kunyulo. Amavolontiya olonyulo anokunceda ekunyuseni unyulo lweBhodi kwindawo abahlala kuyo.Amavolontiya kuzo zonke iiProjekthi zeWiki amkelekile! Injongo kukuba nelinye iVolontiya loNyulo lweeProjekthi zeWiki kuma-30 aphezulu kubavoti abafanelekileyo. Nceda wenze iBhodi yeTrasti eyahlukileyo neyenza ngcono ngokwenza ukuba uluntu lwakho lubandakanyeke kunyulo!
Zininzi iincoko ezenzekayo kwihlabathi jikelele malunga nokukhethwa kweBhodi yeTrasti. Yiza ujoyine iincoko!
Ingxoxo yeBhodi yeTelegram
Iqela eliququzelela unyulo liza kwabelana ngezaziso kunye nohlaziyo apha.
Amavolontiya olonyulo avela eMzantsi Asia
Yongeza ikhonkco apha ukuze abanye bajoyine incoko
Quim Gil -Ulungelelwaniso
Jackie Koerner -Ukuququzelelwa kolwimi lwesiNgesi kunye neMeta-Wiki
Oscar Costero -Uququzelelo lommandla weLatin America
Mahuton Possoupe -Ukuququzelelwa kolwimi lwesiFrentshi
Zita Zage -Uququzelelo lommandla we-Afrika esemaZantsi eSahara
UDenis Barthel -Ukuququzelelwa kolwimi lwesiJamani nakuMntla naseNtshona Yurophu
Ravan Al-Taie -Ukuququzelela uMbindi Mpuma noMntla Afrika
Krishna C. Velaga -Uququzelelo lwengingqi yeAsia yoMzantsi
Mehman Ibragimov -Uququzelelo lwengingqi ye-Mpuma ne-Yurophu
Vanj Padilla -Uququzelelo lweMpuma, uMazantsi-mpuma eAsia kunye nommandla wePacific
Unyulo IBhodi yeTrasti lwalufanele u-2020 onyule izihlalo ezithathu zoLuntu.Nge-Epreli 2020, iBhodi ibhengeziwe ukuba inkqubo yokuvota yayimisiwe. IBhodi yeTrasti ibhengeze ngo-Epreli 2021 isicwangciso sonyulo lweBhodi yama-2021. IBhodi ifuna ukwandisa iyantlukwano kunye nenxaxheba kunyulo lweBhodi.
IBhodi yandisile yaya kwizihlalo ezili-16 ukugubungela ngcono umsebenzi owandayo kunye neendawo zobungcali ezifunekayo ukuqhuba iWikimedia Foundation. Olu lwandiso lwalusekwe kwinxalenye yezindululo ezivela kuphononongo lolawulo lwangaphandle.
Izihlalo ezitsha ezi-3 zoLuntu kunye nezoManyeneyo ezikhethiweyo
Izihlalo ezitsha ezikhethiweyo zeBhodi ezi-3
Izihlalo ezine ziya kulungiselelwa ukukhetha kwi-2021, ezintathu ngenxa yokuhlaziywa kunye nesine kulwandiso lweBhodi oluvunyiweyo. Ezi zihlalo zimbini zihlangeneyo ziya kuthi zikhethwe ngo-2022, kunye nezihlalo ezibini ezifaneleyo (ezine zizonke).
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation_elections/2021/xh&oldid=21968977"